कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख २९ गते आइतबारको राशिफल « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख २९ गते आइतबारको राशिफल
समय : 11:43 PM
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल बैशाख २९ गते आइतबार इश्वी सन् २०१९ मे १२ तारीख वैशाख शुक्लपक्ष अष्टमी तिथी अश्लेषा नक्षत्र वृद्धि योग वव करण चन्द्रमा कर्कट राशीमा ११ः३० बजे सम्म पश्चात सिंह राशीमा आनन्दादि योगमा वज्र योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु अष्टमी व्रत श्री पशुपतिमा दमन पुष्पार्पण गोरखकाली पूजा, विश्व नर्स दिवस – ज्योपं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
अध्यन अध्यापनका निम्ती समय उत्तम रहेकोछ । आयमुलक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा समस्यादेखा पर्नेछ । खानपानमा सजग रहनु होला ।
सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा बृद्धि हुनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु होला । खुशीको समाचारले मन प्रशन्न रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार रहनेछ ।
मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोग ले कार्यक्षेत्र सबल रहला तथा भाग्योदयको योग रहेकोछ । सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
सौदर्यका क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । अनावश्यक यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मित्र वा दाजुभाई बिच मनमुटाब हुन सक्छ ।
यात्रा आम्दानि मुलक रहन सक्छ । कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ ।
काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला । मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । तपाईको बोलिको कारण आफन्तजन हरु रुष्ट रहन सक्छन । नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ । आम्दानि भने मध्यम रहनेछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला ।
तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रु सबल रहनेछन् । नयाँ लगानीको क्षेत्रमा बिशेष होस पुर्याउनु होला । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ ।